Wedzera Midhiya kuSiti Yako Nyore neWimpy Player | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 5, 2007 Svondo, Nyamavhuvhu 5, 2007 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura, ini ndanga ndichitsvaga yakanaka Flash MP3 player kuti mwanakomana wangu awedzere yake mumhanzi kune rake blog nyore. Flash vatambi vakanakisa kuita nekuti vanogona kudhiraivha mimhanzi pane kuita kuti mushandisi aikorese zvese kamwechete. Mushure mekunge ndatsvaga uye kutsvaga, ndakazoitika mhiri kwe Wimpy Player.
Muvhiki ino, kubvunzurudzwa kwandakaitira NPR pakushandisa zviwanikwa zvepamhepo zve kuvandudza muripo wako kwakatumirwa online. Iyo nzvimbo yakanga yakanaka zvekuti ndaida kuiisa pane webhu chishandiso chandakavaka, Payraise Calculator.
Wimpy ine vatambi vakati wandei, bhatani riri nyore, odhiyo inoridza, uye vhidhiyo inoridza. Zvichida chakanakisa chimiro chevatatu ndechekuti ivo vanodhura uye zvizere zvinogoneka. Ini akagadzira mutambi pane saiti yemwanakomana wangu munenge maminitsi makumi matatu.
Ini ndakagadzira a mutambi waJones Soda izvo zvavakaisa pawebhusaiti yavo gore rapfuura. Nezuro, ndakagadzira iri nyore bhatani player ye Payraise Calculator munenge maminitsi gumi.
Audio chinhu chakanakisa chishandiso chemawebhusaiti. Ini handitende kuti inofanirwa kunyanyo shandiswa kana otomatiki kutanga (Ini ndinovenga kushamiswa ne odhiyo online!), Asi inogona chaizvo kuwedzera yakawanda kune webhusaiti - ichipa hunhu sezvinoita mufananidzo kana vhidhiyo. Kuti uwane ruzivo kana chishandiso chewebhu, odhiyo clip inogona kupa vamwe masimba kune saiti zvakare.
Martech Zone: Yakatarwa # 1 paTechnorati